Labo Madaxwayne o Hore o samaystay isbahaysi Ay kursiga kaga tuurayan farmajo | Biyoguurenews.com
Home Wararka Labo Madaxwayne o Hore o samaystay isbahaysi Ay kursiga kaga tuurayan...
Labo Madaxwayne o Hore o samaystay isbahaysi Ay kursiga kaga tuurayan farmajo
Qaar ka mid ah xsbiyada siyaasada ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqay isbahaysi cusub oo ay samaysteen.
Shir ay xisbiyada Hiil Qaran, Hor U Socod, NDP, Waddajir Iyo MBDA ku yeesheen magaalada Muqdisho ayey ka shaaciyeen isbahaysi cusub oo ay samaysteen kaas oo ay ku wajahi doonaan dawlada federaalka ah ee soomaaliya oo ay si adag isku hayaan.
Kulan lagaga dhawaaqayey isbahaysigan cusub ayey goob joog ka noqdeen gudoomiyeyaasha xisbiyada midoobay kaas oo ay ka soo muuqdeen madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud Iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Isbaheysigan oo lagu magacaabo Mashada Xisbiyada Qaran, waxaana lagu doortay Afhayeen KMG ah oo lagu magacaabo C/latiif Muuse Sanyare oo ahaa Xildhibaan hore, waxaana go’aan lagu gaarayin si wadajir ah looga shaqeeyo xaalada dalka oo meesha hada uu maraayo u arkaan inay ku socoto waddo qaldan.
Xisbiyada ku bahoobay Madashan ayaa waxay kala yihiin Himilo Qaran, UPD, Horusocod, NDP Wadajir, MBDA iyo kuwa kale, waxaana ka dhex muuqda siyaasiyiin, Xildhibaano iyo madax hore.
Isbaheysigan cusub ayaa u muuqda mid isu keenaya awoodda siyaasadeed ee Xisbiyada mucaaradka , inkastoo aanay hoggaan dooran, hadana waxaa loo arkaa in ay hal dhinac uga soo wada jeesteen Madaxda xilligan heysa talada dalka.
Previous articleGabadh Soomaali ah oo katirsanayd shaqaalaha BBC-da oo geeriyootay
Next articleDaawo, Ganacsadae Cali waraabe o waxba kama jiraan ka dhigay Qoraaladii maareeyaha hamaha Shidaalka e Xafiisyadooda loo qoray